के एक पत्रकारले यस्तो अशिष्ट, अभद्र र अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ? फेरि नायिका पुजा शर्माले यस्तो गुनासो पोखिन (मार्मिक भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
के एक पत्रकारले यस्तो अशिष्ट, अभद्र र अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ? फेरि नायिका पुजा शर्माले यस्तो गुनासो पोखिन (मार्मिक भिडियो सहित)
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा आज भोली विवाद देखा परेको देखिन्छ । नायिका हरु एक एका आफ्नो पिडा हरु सामाजिक संजाल मार्फत सार्बजनिक गरि रहेको देखिन्छ । त्यस्तै नायिका पुजा शर्मा ले पनि आफ्नो गुनासो पोखेकी छन् । उनि लेख्छिन :
कतिचूप रहने ?कति सहने? Prime tv मा अन्तर्वार्तामा बोलाइयो गएँ सामान्य ज्ञान संग सम्बन्धित प्रश्न गरियो । Interview चल्दा चल्दै मैले पत्रकार प्रकाश सुबेदीजी लाइ मैले राम्रो गर्न सकिन प्लिज यो काटिदिनुस, भने मान्नु भएन । त्यो चिज प्रसारण भयो viral भयो मेरो थुप्रै troll हरू बने, आफ्नै गल्ति हो भनेर चूपचाप बसे ।
पछि जब प्रकाशजी Ap1 जानु भो मलाइ पुन: interview मा आउ पुजा भनेर भन्नु भो, म मानसिक तनाब झेलिरहेको थिए, अब फेरी पूरानो गल्ति कसरी गर्न सक्थे ? म त्रसित पनि थिए ,तसैले मैले सरी दाइ म आउन सक्दिन भने , तर त्यसपछि उहॉले आफ्नो कार्यक्रम मा मलाइ लक्षित गरेर “ दारा निस्केको, महानायिका” भनेर शारिरिक हाउभाउ लाइ लक्षित गरेर अत्यन्त क्षुब्ध ढंगले प्रस्तुत गरेर मेरो मानहानि गर्न कुनै कसर छोड्नु भएन , के एक पत्रकारले यस्तो अशिष्ट ,अभद्र र अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ ?
म नभए पनि कोहि अभिनेत्री लाइ त दारे अभिनेत्री सम्बोधन गरिएकै छ त्यॉहा ! हामि कलाकार हरू कहिले सम्म पालै पालो यस्तो अतिबादको शिकार भैरहने? हाम्रा गल्ति छन्, होलान् पनि त्यो कुरा पत्रकार मित्रहरू ले औल्याइ दिनु पर्छ तर यो ढंगको प्रस्तुतीकरण ले के पत्रकारिता को पनि इज़्ज़त बढ्छ त?
कृपया सूझाब सल्लाह को अपेक्षा गर्द्छू ! यंहाहरूको सल्लाह अनुसार अगाढि बढ्ने छू ! धन्यवाद!!